१७:५७, १० सेप्टेम्बर २०११ जस्तै गरी पुनरावलोकन
maintenance, replaced: ुु → ु (2)
१६:०५, ६ सेप्टेम्बर २०११ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
(भाषामा देखिएका अशुद्ध शव्दहरुको शुद्धिकरण, replaced: नेपालि → नेपाली using AWB (7794))
१७:५७, १० सेप्टेम्बर २०११ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
सा (maintenance, replaced: ुु → ु (2))
काम केही थिएन । हजारौँ गोली पड्काएर आएको सैनिक यहाँ कमलकोटीले गुँड लगाएको बन्दुक भिरेर टुँडिखेलमा कबाज खेल्न थाल्यो । त्यो पनि एक घन्टालाई मात्र । त्यसपछि दिनभर फुर्सद । बन्दुक पनि बोकेर आउनु पर्दैनथ्यो । टुँडिखेलमा थुपारएिकामध्येबाट एउटा छान्यो र गड्याप्प बुुटबुट बजारेर सलामी ठोक्यो । अनि फुत्त फ्याँकेर डेरामा गयो र जाउलो च्यापेर आफ्नो मनलाग्दो गर्‍यो ।
उनका जीवनमा अनेकौँ मोडहरू आए । मोडहरूसँगै सानातिना प्रतिकूलताहरू नथपिएका होइनन् । तर, भौतिक दुःख भन्ने उनले अनुभव गर्न पाएनन् । रेडियोदेखि सानो पर्दा र ठूलो पर्दाका अनगन्ती चलचित्रमा काम गरेर प्रसिद्धि र सम्मानको जीवन बिताए, बिताइरहेछन् । तर यात्रा, जीवनको उत्तरार्धमा छ । त्यसैले उनी अब परमार्थको चिन्तनमा छन् । बिहानै मठमन्दिरको चक्कर लगाउँछन् । उनलाई थाहा छ, जानेर कसैलाई दुःख दिएनन् । युुद्धयुद्ध भनेको मान्छे मार्नु नै हो । मारे । त्यो उनको कर्तर्व्य थियो । तर, त्यसो भनेर परमात्माले कहाँ मान्लान् र ? मारेको त हो नि ! त्यसैले उनी धर्मकर्ममा निष्ठाका साथ लागेको छन् । लर्केजोवनमा तरुनीसँग पनि जिस्िकए । "अहिले त म यस्तो छु, जवान हुँदा कस्तो थिएँ होला, अनुमान गर्नूस्," उनी ठट्यौलो शैलीमा भन्छन््, "केटीहरू मलाई देखेर हुरुक्क हुन्र्थे, भँगेरा चारोमा झुम्मिएझैँ झुम्मिन्थे ।" त्यो उमेरमा, त्यो बैँसमा उनले पनि रमाइलो गरे । उनलाई त्यसको हिसाब पनि मिलाउनु छ । उनले त्यसको मोक्षप्राप्तिका लागि पनि बाटो बनाउनुपर्छ । अब उनले गर्न बाँकी काम खालि यत्ति हो । उनी यतिखेर परत्रको गन्तव्यमा पुग्न भक्तिधारामा डुबेर गोरेटो निर्माण गररिहेछन् ।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/165805" बाट अनुप्रेषित